LibreOffice 7.1.4 inogadzirisa makumi matanhatu mabhugi uye kuenderana neMS Office | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe mune midhiya senge LxA isu tinowanzo taura nezve software inoshanda seimwe nzira kune imwe, dzimwe nzira hadziwanzo kukwana. Ndicho chimwe chinhu chinoratidzwa mukati kusunungurwa kwega kwega yeiyo inozivikanwa kwazvo yemahara suite suite, seimwe yeshanduko inogara ichitaurwa neThe Document Foundation ndeyekuti shanduko dzakaitwa kugadzirisa kusawirirana neMS Office. Ndicho chimwe chinhu chavakaitawo nhasi mu kusunungura chinyorwa de LibreOffice 7.1.4.
Pakazara, TDF inodaro ndagadzira angangoita makumi masere ekugadzirisa mune iyi yazvino vhezheni yenharaunda yeLO. Chikamu chechishanu, icho chaizoenderana pamwe neanenge gumi nematanhatu, chakanangana nekugadzirisa kuenderana neiyo DOCX, XLSX, PPTX uye zvekare DOC mafomati. Zvekare zvakare, ivo vakatora mukana wekuvhurwa kukurudzira makambani kuti aite kusvetukira kuiyo Enterprise vhezheni, yavanogamuchira nayo yakagadziridzwa rutsigiro uye pane-zvinoda maficha.
LibreOffice 7.1.4 haisati yakurudzirwa yezvikwata zvekugadzira
Zvekare zvakare, isu tinofanirwa kuyeuka kuti LibreOffice 7.1.4 ndiyo yakanyanya-kudhara vhezheni yesutu, zvinoreva kuti ine zvigadziriso zvazvino, asi zvakare nezvimwe zviputi. Naizvozvo, Iyo Gwaro Siseko ichiri kukurudzira LibreOffice 7.0.6 yezvikwata zvekugadzira.
Kune rimwe divi, nhasi taudzwa nezve a kutama protocol Kutsigira kufambiswa kwemakambani anezvivakwa kuLibreOffice:
Iyo Gwaro Foundation rakagadzira Migration Protocol yekubatsira makambani kufamba kubva kumahofisi emahofisi masutu kuenda kuLibreOffice, inoenderana nekutumirwa kweLTS vhezheni yemhuri yeLibreOffice Enterprise, mukuwedzera kune kudzidziswa kwekutama uye kubvunza kune nevanozivikanwa nyanzvi vanopa maCIO uye Iwo mamaneja eIT anokoshesa-akawedzera mhinduro zvinoenderana nezvipo zvechiridzi.
LibreOffice 7.1.4 ikozvino inogona kutorwa pane chero system yakatsigirwa kubvira peji rekurodha peji. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanozotora DEB neRPM mapakeji, asi ichaonekwawo paFlathub munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 7.1.4 inogadzirisa yakatenderedza 80 bugs, 20% yekuvandudza kuenderana neMS Office
GRUB 2.11 ichave anotsiva kuna 2.06 uye anosvika mugore